Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar’Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Cho Htun Aung, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Brunei Darussalam, presented his Credentials to His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar’Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, on 21 May 2015, in Bandar Seri Begawan.
Dated.2June 2015
ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးချိုထွန်းအောင်သည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဘန်ဒါဆရီဘီဂါ၀န်မြို့၌ ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ် နိုင်ငံ ဘုရင်မင်းမြတ် ဆူလ်တန် ဟာဂျီ ဟာဆာနာလ် ဘိုလ်ကီးယား မူအစ်ဇာဒင် ၀ါဒိုလာ အဗ်နီ အယ်လ်မာဟွန် ဆူလ်တန် ဟာဂျီ အိုမာ အလီ ဆိုင်ဖူဒင် ဆအာဒူလ် ခိုင်ရီ ၀ါဒင် ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ‌ဇွန်လ ၂ ရက်